Dacwad ah xasuuq dadweyne oo maanta nin lagu soo oogay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dacwad ah xasuuq dadweyne oo maanta nin lagu soo oogay
La daabacay onsdag 6 september 2017 kl 14.16
Xasuuqii dadweyne ee Rwanda. sawir: Jody Kurash
Nin Örebro ku nool ayaa maanta lagu soo oogay dacwad ah xasuuq dadweyne iyo dembiyo xaquuqda dadka dhan ah.
49 jir ku nool magaalada Örebro ayey dacwadaan ku soo oogtay xeer-ilaaliye ka tirsan xeer-illaalinta dembiyada caalamiga ah oo sal-dhigeeda yahay Stockholm. Dembiyo ninkan loo heysto ayey ka mid yahiin xasuuq dadweyne iyo dembiye kale oo culus oo xaquuqda dadka ka dhan ah. Dembiyadaan ayaa la sheegay in ninka dacwad lagu soo oogay uu ka gaystay dalka Rwanda sannadkii 1994.
Ninkan dacwad lagu soo oogay ayaa asalkiisa ka soo jeedaa waddanka Rwanda. Sida dacwadda ku qoran dembiyo iskugu jira dil, isku dayo dil, kufsi iyo afuudyo ayuu u geystay dad ka tirsan qoomiyadda Tutsi ee Rwanda ku nool. Iyada oo ujedaadiisa aheyd sidii guud ahaan ama qayb ka mid ah qoomiyaddaas loo cirib goyn lahaa, waa sida ay tabisay P4 Örebro in ay ku xusan tahay dacwadda ninkan loo heysto.
Sida xeer-illaalinta sheegtay ninkaan ayaa ahaa hoggaamiye heer degaan dembiyadan markii uu geysanayey isaga oo la kaashanayey dad kale.
– Waxaa lagu tuhmayaa in uu abaabulay toosna uga qayb qaatay dembiyadaan, ayey tiri Hana Lemoine oo ah xeer-illaaliye.
Ninkan ayaa la soo qabtay bishii oktober sannadkii hore, welina lagu hayaa xabsiga.
– Arrintan waxa ay bilaabatay markii Rwanda soo dalbatay in ninkaan loo soo gacan geliyo kaas oo lagu tuhmayo demebiyo ah xasuuq dadweyne. Laakiin maadaama ninkan haysto dhalashada Sweden uma dhiibayno waddan ka baxsan Yuurub laakiin madaama dembiyo culus lagu tuhmayo waxa aan ku qasbanahay in aan baarno, ayey tiri xeer-illaaliye Hanna Lemoine.
Waxaa laga jooga 20 sanno xasuuqii dadweyne ee ka dhacay Rwanda 1994, waagaas oo lalaayey dad gaaraya hal milyan oo qof halka labo milyan dad kor u dhaafaya la qaxiyey.